किन कम उमेर मै छाला चाउरिन्छ ? यस्तो छ कारण र उपाय ! – ramechhapkhabar.com
किन कम उमेर मै छाला चाउरिन्छ ? यस्तो छ कारण र उपाय !
उमेर बढेसँगै छाला चाउरिने क्रम पनि बढ्दै जान्छ । यसलाई सामान्य रुपमा नै लिनुपर्छ । तर, कलिलो उमेरमै छाला चाउरिने समस्या देखियो भने यसको उपचार खोजीतिर लाग्नु पर्छ । पछिल्लो समय किशोर उमेर मै धेरैको छाला चाउरिन थालेको छ । केही व्यक्तिमा त किशोर अवस्थामै छाला चाउरिन थालेपछि मानसिक रोगी समेत बनेका छन् ।
छालाको भित्री सतहमा इलास्टिन र कलेजिन नामक फाइबर हुन्छन् । यी फाइबरले छालालाई स्वस्थ्य राख्न सहयोग गर्छ । बिविध कारणले यी फाइबरको कमी भए छाला कमजोर र लचकदार भएर आफ्नो ठाउँ छोड्न थाल्छ र छाला चाउरिने क्रम बढ्छ । स्वभाविक रुपमै ढल्किदो उमेरसँगै यी फाइबरले आवश्यकता अनुरुपको काम गर्न नसकेर छाला चाउरिन्छ ।
कम उमेरमै छाला चाउरिने कारण :
१) सूर्यको सिधा प्रकाशमा धेरै समय बस्दा २) सूर्यको बिकिरण वा अल्ट्राभाइलेट किरण सिधै छालामा पर्दा यसले प्रत्यक्षपरोक्ष हानी गर्छ ३) यस्तो किरणले छालालाई चाहिने इलास्टिन र कलेजिन नामक फाइबर घट्दा४) धुम्रपान तथा मध्यपानको सेवन ५) वंशाणुगत गुण ६) प्रदुषित वातरण ७) कम गुणस्तर र छालाको प्रकृति विचार नगरि सौन्दर्य सामग्रीको प्रयोग ८) बढी तौल ९) मधुमेह तथा थाइराइट १०) पानी कम पिउनु ११) तनाव
१) सम्भव भएसम्म सूर्यको किरणबाट जोगिने २) धुम्रपान तथा मध्यपान नगर्ने ३) पौष्टिक आहार सेवन गर्ने ४) सक्रिय जीवनशैली अपनाउँने ५) छालाको प्रकृति हेरेर विशेषज्ञको सुझाब अनुसार घाममा निस्कदा सधै सन्सक्रिमको प्रयोग गर्ने ६) पछिल्लो समय चाउरिएको छालालाई अस्थायी रुपमा लेजर वा अन्य विधिबाट हटाउने७) बुढेस्कालमा चाउरिएको छाला तल लत्रिन्छ भने कम उमेरमै चाउरिए पछाडितीर सोरिन्छ
उमेर बढेसँगै छाला चाउरिने प्रक्रिया रोक्न निकै कठीन छ । यो स्वभाविक पनि हो । तर, बेलैमा छालाको हेरचाह गर्दा चाउरिपना कम गर्न भने सकिन्छ ।